Buugga Qoraalka ee Moleskine | Abuurista khadka tooska ah
Buug-yarahan xusuus-qorka ah ayaa laga yaabaa inuu yahay buugga ugu waxtar badan ee naqshadeeye kasta oo garaaf ah Maanta, maaddaama ay gebi ahaanba isku mid tahay iyo iyada oo la ilaalinayo astaamaheeda dhaqameed, waxay si toos ah ugu xiran tahay deegaanka dijitaalka ah iyada oo loo marayo codsi dijitaal ah. Waa ikhtiyaar wanaagsan maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad fikradda ka dhaadhiciso naqshadahaaga oo aad qorsheyso adigoon ka walwalaynin habka digitization-ka iyo sameynta ku habboonaanta dalabka.
Xirmadaan gaarka ah waxaa soo saaray Moleskine waxaana ka mid ah saddex qaybood: Buug gaar ah oo loogu talagalay aaladda moobaylka, qalin qalin ah iyo codsi gaar ah. Sidan oo kale, waa suurtagal in la dijitaal geliyo dhammaan waxyaabaha ku qoran qoraalada dijitaalka ah iyada oo aan loo baahnayn in la qaado sawirro dijitaal ah oo sawir gacmeedyada ah ka dibna la fayl gareeyo faylalkayaga ama lagu sawiro tayo shaki leh. Qaab-dhismeedka buug-yaraheena gaarka ah wuxuu soo bandhigayaa muuqaal aad ugu eg kan kiniinnada garaafka leh oo leh geesaha wareegsan qalinkuna aad buu u fududahay sidoo kale wuxuu leeyahay kaamiro qarsoon oo noo oggolaan doonta inaan digitiri karno dhammaan noocyada maaddooyinka ah.
Dhinaca kale, codsigu gabi ahaanba waa u bilaash labada isticmaale ee iPhone iyo Android wuxuuna noo ogolaanayaa inaan xafidno qoraalo ama sawir gacmeedyo sidoo kale aan u dhoofino, kula wadaagno shabakadaha bulshada iyo dabcan wax ka bedelno. Waxa ugu cajaa'ibka badan ee ku saabsan naqshadeedu waa inay tahay kiniin warqad dhaqameed ah, in kasta oo dabcan, warqaddeenna qaaska ahi ay 100 dhumuc dhumuc leedahay oo loogu talagalay inay iska caabbiso shaqada sawir qaadista ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Warqadda warqadda ee warqadda ah oo sidoo kale ah kiniin jaantus ah